बेल्जियमका स्टार गोलरक्षकका लागि रियल र चेल्सीबीच ट्रान्सफर फि मा सहमति ! – Khel Dainik
बेल्जियमका स्टार गोलरक्षकका लागि रियल र चेल्सीबीच ट्रान्सफर फि मा सहमति !
एजेन्सी । फ्रेन्च आउटलेट आरएमसीको रिपोर्टअनुसार बेल्जियन गोलरक्षक थिबाउ कोर्टवाको अनुबन्धलाई लिएर चेल्सी र रियल मेड्रिडबीच ट्रान्सफर फि मा सहमति बनेको छ ।
रियलले रसिया विश्वकपको गोल्डेन ग्लोभ अवार्ड विजेता कोर्टवालाई ३५ मिलियन युरोमा चार बर्षको लागि अनुबन्ध लागेको बताइएको छ । २६ बर्षिय कोर्टवाको चेल्सीसँगको सम्झौता अब केवल १ बर्ष मात्र बाँकी छ । यो अवस्थामा उनको मार्केट भेल्यु समेत घटेको छ ।
यद्यपि एचएलएनका पत्रकार क्रिस्टोफ टेरुंएरका अनुसार चेल्सीले यी बेल्जियन गोलरक्षकको विकल्प नभेट्दासम्म उनलाई नबेच्ने बताउँछन् । कोर्टवाको विकल्पको रुपमा चेल्सीले रोमाका एलिसनलाई हेरेको छ । तर एलिसनका लागि अर्को इङलिस क्लब लिभरपुलले ७० मिलियन युरोको बिड गरिसकेको छ ।
जसका कारण चेल्सीलाई यो स्थानान्तरण पूरा गर्न कठिन भईदिन सक्छ । यदि चेल्सीले एलिसनलाई अनुबन्ध गर्न असफल भए उसले लेस्टर सिटीका विश्वकप स्टार केस्पर श्माइल, स्टोक सिटीका ज्याक बटलेण्ड र आर्सनलका पिटर चेकलाई यो सूचीमा राखेको छ ।
— Kristof Terreur  (@HLNinEngeland) July 17, 2018
कोर्टवाले रसिया विश्वकपमा बेल्जियमका लागि शानदार प्रदर्शन गर्दै उत्कृष्ट गोलरक्षकले पाउने गोल्डेन ग्लोभ अवार्ड जितेका थिए । यदि उनी रियलमा आवद्ध उनले केलोर नाभासलाई विस्थापित गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ ।
← बार्सिलोनाले गर्यो गत सिजन किर्तिमानी आम्दानी सिरिजमाथि पाकिस्तानको कब्जा →